नेकपामा नयाँ समीकरण, यसरी एक्लिए नेता नेपाल – Online Kendra
दशैँको टीका लगाउन जानेहरु बढेसँग काठमाडौंमा पुनः चहलपहल सुरु
आजबाट नेपालमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने
नेपालमा ४१९ जना रोहिङ्ग्या शरणार्थी
चेन्नई सुपर किंग्सलाई आईपीएल-२०२१ को उपाधि
आज विजयादशमी: शुभ साइतको प्रतीक रातो टीका र समृद्धिको प्रतीक जमरा लगाएर मनाइँदै
नेकपामा नयाँ समीकरण, यसरी एक्लिए नेता नेपाल
३ भाद्र २०७६, मंगलवार ०६:४१
भाद्र ३, काठमाडौँ । सत्तारूढ नेकपाभित्र पार्टीमा नयाँ धुव्रीकरण देखा परेको छ। पार्टीमा मुख्य तीन धार (केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल) भए पनि एजेन्डागत निर्णयमा दुई धार देखिँदै आएको छ।
नेताहरूले आफ्नो ‘पोजिसन’ ख्याल गर्दै बेलाबेलामा दुई धारको समीकरण बनाउँदै आएका छन्। साउन ३१ र भदौ १ मा बसेको सचिवालय बैठकपछि नेकपाभित्र नयाँ समीकरण निर्माण भएको हो।
बैठकपछि अध्यक्षद्वय केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेताहरू वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेललगायत नेताहरूको एउटा कित्ता र वरिष्ठ नेता माधव नेपालको एक्लो कित्ता देखा परेको छ।
सचिवालयकै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ कतै खुलेका छैनन्। अर्का नेता रामबहादुर थापाले ओली–दाहाल एकतामै जोड गरेका छन्।
नौ सदस्यीय सचिवालयको पछिल्लो समीकरणले वरिष्ठ नेता नेपाल एक्लो परेका मात्र छैनन्, १५ महिनादेखि पार्टीमा रहँदै आएको तेस्रो मर्यादाक्रम पनि खोसिएको छ।
‘पार्टीभित्रको शक्ति केन्द्रमा तरलीकृत हुने क्रम विगतदेखि नै भइरहेकै छ। पछिल्लो सचिवालय बैठकबाट पार्टीमा नयाँ समीकरण देखापरेको छ,’ स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘सचिवालयको निर्णयबाट सिनियर नेताहरूले कोसँग मिल्दा पार्टीभित्र आफूलाई सहज हुन्छ, उतैतिर मिलेर पोजिसन बनाउन खोजेजस्तो देखिएको छ।’
अध्यक्षद्वय ओली, दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालका अलगअलग तीन धार छन्। त्यसमध्ये पार्टी एकतायता नै ओली र नेपालका दुई धार अहिलेसम्म ‘परस्पर विरोधी’ देखिएका छन्।
अध्यक्ष दाहालले भने कहिले ओलीसँग त कहिले नेपालसँगको गठजोड गर्दै आएका छन्। पछिल्लो सचिवालय बैठकपछि नेपाल एक्ला देखिएका छन् भने ओली–दाहाल मिलेका छन्।
यो पटक नेकपाभित्रको समीकरण निर्माणमा नयाँ ढंगले धुव्रीकरणको विकास भएको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमकै नाफाघाटालाई लिएर धार बनाउने–भत्काउने क्रम चलेको छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले पछिल्ला दिनमा पार्टी सचिवालयमा आफू अप्ठ्यारोमा परेको ठानिरहेका थिए। अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम सहितका नेताहरूको एउटा धुव्र बनिरहेको विषयमा ओली जानकार थिए।
आफू विदेशमा रहेका बेलासमेत आफूइतर नेताहरूको भेटघाट र छलफलका विषयमा उनी ‘अपडेट’ भइरहेकै थिए। यस्तो बेला उनलाई सचिवालयमा साथ दिनेमा नेता पोखरेल र महासचिव पौडेल मात्र थिए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा आफू र अर्का अध्यक्षबीच रहेर ‘तटस्थ’ को भूमिका खेलिरहेका थिए।
Top Headline, राजनीति
ट्रम्पका कारण विशाल आर्थिक मन्दीमा जाँदै अमेरिका
कमाउ धन्दा चलाउन २० वर्षपछि ब्युँताइयो सरकारी निर्माण कम्पनी
३० आश्विन २०७८, शनिबार ०७:१५ OnlineKendra 0
आश्विन ३०, काठमाडौ । मान्यजनको हातबाट दशैँको टीका लगाउन जानेहरु बढेसँग काठमाडौंमा पुनः चहलपहल बढ्न थालेको...
Top Headline प्रदेश प्रदेश ३ समाज
३० आश्विन २०७८, शनिबार ०६:५६ OnlineKendra 0
आश्विन ३०, काठमाडौ । हाल भारतको आन्ध्र प्रदेश तथा ओडीसाको तटीय क्षेत्र आसपास रहेको न्यून चापीय...
३० आश्विन २०७८, शनिबार ०६:५२ OnlineKendra 0
आश्विन ३०, काठमाडौ । काठमाडौँको कपनस्थित लसुनटारमा जस्ताको टहराले बनेको एउटा टोल छ । सो टोलमा...
दशैको टिकामा कस्तो आर्शिवाद दिने ? के छ महत्व ?
“यो सरकार सट्टापट्टामा बनेको स्पष्टै देखियो” : अध्यक्ष ओली
थप ४५५ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि
उदयपुर सिमेन्टमा सुशासन कायम गर्दै महाप्रबन्धक न्यौपाने ! यस्तो छ उद्योगले फड्को मार्ने योजना
सय किसान अवधारणा: एइसी र आराभा नेपालबीच कृषि सम्झौता
प्रभु मनि ट्रान्सफर र वेस्टर्न मनि ट्रान्सफरबीच…